पैसाको पछि पछि प्रियंका कहिले सम्म टिकीएला त स्टारडम ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
पैसाको पछि पछि प्रियंका
कहिले सम्म टिकीएला त स्टारडम ?
फिल्मी फण्डा । नायिका प्रियंका कार्की पैसाकै लागि कामको पछि लागेको खबर बाहिरिएको छ । राजधानीमा फिल्म बटरफ्लाईले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममै अघोषित रुपमा प्रियंका स्वंयमले यस्तो खुलासा गरेकी हुन् । सबै फिल्म खेल्ने, फिल्ममा जस्तो पनि भुमिका निर्वाह गर्ने, फिल्मको पब्लिसिटीमा कहिले नहिड्ने जस्ता प्रश्नहरु प्रियंकालाई राख्दा प्रियंकाले आफु पैसाकै लागि काम गरेकोले पैसाको पछि पछि लागेको अघोषित रुपमा बताएकी हुन् ।
काम गरेर भविष्य साँच्नु पर्ने भएकोले जस्तो पनि काम (भुमिका) गरेको उनले बताईन् । काममै व्यस्तताका कारण रिलिज फिल्मको प्रमोशनमा हिड्न नभ्याईएको उनको भनाई छ । प्रियंका लोक दोहोरी देखी म्युजिक भिडियो र फिल्ममा आमा देखी केमियो र लिड रोलमा पनि देखिने गर्छिन् । यसरी स्टार प्रियंकाले आफ्नो भुमिका नहेरी पैसाकै लागि फिल्म खेल्ने गरेकी हुन् । नाई नभन्नु ल ४ तथा छक्का पञ्जा २ लगायतमा उनी आमाको भुमिकामा देखिएकी थिईन् भने शिव सुवेदीको लोक दोहोरी गीतमा पनि खेलेकी थिईन् । यसो त उनी विभिन्न म्युजिक भिडियो देखी फिल्ममा केमियो सम्ममा देखिने गर्छिन् ।
फिल्म क्षेत्रमा चल्तिमा देखिएकी नायिका प्रियंका आमा देखी छोरीसम्मको भुमिका गरिरहेकी हुन्छिन् । यसले प्रियंकाको करिअरमा पक्कै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा बेफाईदा पु¥याईएकै होला । कतिपय फिल्मकर्मीले प्रियंकाले प्रमोशनमा साथ नदिएको बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा प्रियंकाले बलिउडमा जस्तै नायिकालाई पनि ११ करोड दिए आफु पनि प्रमोशनमा हिड्ने बताईन् । नेपाली फिल्ममा पारश्रमिक कम हुने भएकोले फिल्ममा काम गर्नु पर्ने, कामकै चापले प्रमोशनमा हिड्न नभ्याईने प्रियंकाको दावी छ ।
तर प्रियंका फुर्सद हुँदा समेत प्रमोशनमा हिड्ने गरेकी छैनन् । गत हप्ता लण्डनबाट फर्किएकी प्रियंका फुर्सद हुँदा पनि फिल्म बटरफ्लाईको प्रमोशनमा देखिएनन् । उनी आफ्नो ब्वाईफ्रेण्ड आयुष्मान देशराजसँग भ्रमणमा थिईन् । यसरी स्टार प्रियंकाको स्टारडम कहिले सम्म टिक्ने हो ? त्यो चाँडै थाहा होला ।